Soo dejisan Xvid 1.3.7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Xvid
Xvid – software ah iyo baaq iyo kelmadaha ee digital qaab video. Xvid kuu ogolaanayaa inaad hoos u size file in ay kordhiyaan xawaaraha wareejinta xogta network ah. Software waxuu si loo xakameeyo goobaha ay diinta video oo dhigay shaxda quantization ah. Intii lagu riixo ku Xvid kuu ogolaanayaa inaad sheeg size file ah oo ay sabab u tahay geynta ee riixo dhamaystiran tayada sawirka ugu badnaan waxaa lagu gaadhi karaa. Software waxaa ka mid ah khariidad codec u arkaysid video files qaab Xvid in ciyaaryahan oo kala duwan.
Luqad iyo kelmadaha ee digital qaab video
Yaraysaa ee files
Settings oo isbadal ah il video
Soo dejisan Xvid
Faallo ku saabsan Xvid
Xvid Xirfadaha la xiriira
Software in la abuuro warbaahinta server dhamaystiran. Software wuxuu taageeraa helaan fog fog si ay files warbaahinta ka computer iyo qalab kala duwan.